Mangataka fanafahana ilay mpikatroka Alaa Abd El Fattah ny mpanohana · Global Voices teny Malagasy
Nohazonina roa taona tsy misy fitsarana ilay mpikatroka
Voadika ny 07 Oktobra 2021 5:32 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, عربي, Español, русский, Nederlands, English
Alaa Abd El Fattah, sarin'i Nariman El-Mofty, nahazoana alàlana. Alaa Abd El Fattah, photo by Nariman El-Mofty, used with permission.
Tandindomin-doza ny ain'ilay bilaogera sady mpikatroka ejipsiana Alaa Abd El Fattah. Rangahy 39 taona nigadra tamin'ny taona 2019 noho ny fiampangana ho manaparitaka vaovao diso, saingy, na eo aza ny fetra napetraky ny lalàna ejipsiana, dia mbola tsy niakatra fitsarana izy.
Nandritra ny fotoam-pitsarana vao haingana momba ity raharaha ity, niresaka ny fihenan'ny fahasalaman'ny sain'i Abd El Fattah ny mpisolovava azy ary nanatsonga ny teniny fa “tsy afa-manohy aho.”
Zatra miteny amin'ny fanohanana ny teknolojia misokatra ahafahan'ny tsirairay miteny malalaka, ary nanana ny feony malaza nandritra ny fitroarana Arabo tamin'ny taona 2011, nigadra na nanaovana famotorana hatrany i Abd El Fattah teo ambany fitondran'ny filoham-pirenena ejipsianina rehetra nandalo tamin'ny androm-piainany. Nosamborina izy tamin'ny taona 2006 satria nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana am-pilaminana. Tamin'ny 2011, nandany roa volana an-tranomaizina izy, tsy nahatratra ny nahaterahan'ny zanany lahy, Khaled. Tamin'ny 2013, nosamborina sy notazonina nandritra ny 115 andro izy nefa tsy notsaraina, talohan'ny nigadrany dimy taona, ary avy eo nahazo didim-pitsarana sazy miantona dimy taona fanampiny, izay nanerena azy handany isak'alina tao amin'ny biraon'ny polisy ao an-toerana.
Volana maromaro tao anatin'ity vanim-potoana fizahan-toetra ity, nosamborina indray izy noho ny fiampangana ny fanaparitahana vaovao lainga sy ny fidirany amina fikambanana mpampihorohoro. Notazonina tao amin'ny zoro fiarovana farany ambony tao amin'ny fonjan'i Tora izy, saingy mbola tsy natolotra ny fitsarana. Tamin'ny volana aprily 2020 dia nanao fitokonana tsy hihinan-kanina izy nandritra ny telo herinandro. Tamin'ny 29 septambra 2021, nihoatra ny fe-potoana voafetra voafaritra ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana ao Ejypta ny fotoana nihazonana azy mialoha ny fitsarana. Nefa mbola any am-ponja ihany izy.
Ankoatra ny fotoana fohy naningana nandritra ny fitokonany tsy hihinan-kanina dia tsy nahazo niditra an-tsehatra namaky fitaovana famakian-teny i Abd El Fattah ary tsy nanam-potoana ivelan'ny tranony hanaovana fanatanjahan-tena na hifoka rivotra madio. Tsy mahazo mitazona famantaranandro enti-tanana na famantaranandro mihatona an-drindrina izy. Hatramin'ny nanombohan'ny fameperana COVID-19 dia fitsidihana 20 minitra isam-bolana ihany no nomena azy.
Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy izay, ny fianakavian'i Abd El Fattah sy ny mpisolovava azy dia nanao antso fanairana ho fiarovana azy, tamin'ny ahiahy fa miharatsy ny fahasalamany ary mieritreritra hamono tena izy.
Tao anaty fanambaràna navoaka tao amin'ny Facebook, nanao fangatahana ho fiarovana azy sy ho famotsorana azy ny fianakaviany:
Tandindonin-doza mitatao i Alaa … Mikoroso fahana ny fahasalamany ara-tsaina tao anatin'ny tetika tsimifaditrovana nandritra ny roa taona nampiharin'ny Minisiteran'ny Atitany sy ny Sampan-draharahan'ny Fiarovam-pirenena. Tandindonin-doza ny ainy, ao amin'ny fonja miasa tanteraka ivelan'ny lalàna ary tsy miraharaha ireo tompon'andraikitra rehetra, voalohany indrindra amin'izany ny mpampanoa lalàna, ny minisitry ny atitany, ny minisitry ny fitsarana ary mazava ho azy ny filoham-pirenena.
Nanampy ny antso nataon'ny fianakaviany amin'ny famotsorana azy ireo zatra miteny manerana ny faritra arabo sy izao tontolo izao. Karazany amin'izany ny fangatahan-dry zareo hamindrana azy amin'ny fonja hafa mba hafa kokoa ny iainana ao anatiny, anatin'izany ny fahafahana mijery literatiora, manao fanazaran-tena an-tokotany sy ny fahazoana hovangiana betsaka kokoa.
Nanatevin-daharana ireny vondrona ireny ny Global Voices, sy ny fikambanana iraisampirenena toy ny Amnesty International, ny Committee to Protect Journalists, ary ny Electronic Frontier Foundation amin'ny antso.
Ampirisihanay ihany koa ny mpanohana hanao komandy ny bokiny hoavy, “You Have Not Yet Been Defeated” [Mbola tsy resy ianao]. Eny, na dia eo aza ny didy mihatra aminy, nanoratra andian-dahatsoratra i Abd El Fattah raha tany am-pamonjana ary nangonina sy nahitsin'ny mpamoaka boky mahaleotena Fitzcarraldo Editions ao amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK). Nokasaina hivoaka voalohany amin'ny 20 Oktobra 20, tafiditra ao anatin'ny amboara ny teny fampidirana nataon'ilay mpanoratra Kanadiana sady mpikatroka ara-tsosialy Naomi Klein.
Hita ao anatin'ny boky ihany koa ny sasany amin'ireo izay vao nosoratan'i Abd El Fattah ho an'ilay haino vaky jery mahaleotena ejipsiana Mada Masr. Ao amin'ireny asa-soratra ireny, mitondra ny lohateny hoe “Our bodies and enmity: A personal introduction,” [Ny vatantsika sy ny fandrafiana: fampidiran'ny tena manokana] no nanoratany ny “tantara” -ny vatan'ireo gadra sy ny eritreritra amin'ny fiantraika lalin'ny fifehezan'ny fanjakana ny vatany:
Tsy resaka fahasalaman'ny voafonja ny tantara fa resaka fahasalaman'ny firenena. Tantaran'ireo fitaovana famoretana niampita tamin'ny andian-taranaka maro sady fandrafiana mety holovain'ny taranaka hoavy. Ny fandavana tanteraka ny feo sy ny vatana no vahana mankany amin'ny fandrafiana. Mihevitra ny fandrafiana ho fanapahan-kevitra niniana hampisy gidragidra sy fanaintainana izahay, fa raha maheno ahy ianao, mbola azo atao ny mihemotra sy mampitsahatra ady; na dia tsy mahazo tombony amin'izany aza ianao, farafaharatsiny mbola mitovy toerana iaingana isika. Fa raha mamaivay ny fandrafiana, tsy mahita na miezaka ny hahatakatra ahy ianao. Lasa zavatra aho, zavatra hofongorina, hopotehina, hampanjavonina, lavina, ahilika; na lasa sariohatra na lasa mpitondra faty aho, tsy manam-pitaovana, tsy manatrika. Ny lovan'ny fandrafiana no sanda aloan'ny vatana rehetra, ary mbola mandoa ireny na dia efa manjavona aza ny gidragidra.
Ahoana ny hiarovantsika ny vatan'ny zanatsika tsy hanana ny lovan'ny fonja? Tsy mijanona amin'ny famoahana voafonja ny valiny. Manomboka amin'ny famoahana izany, fa tsy maintsy mifarana any amin'ny vina famafana ny fonja, fa tsy voafonja.
Tohano ny fanentanana #SaveAlaa
Amin'ny talata 5 oktobra, hanamafy ity antso ity ny mpanohana manerana izao tontolo izao amin'ny fampiasana farangonteny #SaveAlaa sy #FreeAlaa. Indreto ny hetsika azon'ny rehetra atao ho fanohanana ny fanentanana:
Mandranty filazana fanohanana an'i Alaa sy ny famoahana azy atao amin'ny sehatra media sosialy rehetra miaraka amin'ny farangonteny #SaveAlaa na #FreeAlaa.
Manova sarintava amin'ny media sosialy sy amin'ny Zoom hatao fanampiny amin'ny farangonteny #SaveAlaa.
Mandrisika fanaovana komandy mialoha ny bokin'i Alaa, mivoaka amin'ny 20 Oktobra. Torohay fanampiny: https://www.freedomfor.network/
Ampirisihana ny fikambanana hanomana hiteny sy hanohana an'i Alaa any amin'ireny fihaonambe ireny ka ao anatin'izany ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana, Vovonana Teknolojia Danoà ho amin'ny Demaokrasia, Vovonana Demaokrasia Manerantany eo Etazonia, Bread&Net, IGF, ary ny fotoam-pivorian'ny vaomieran'ny zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana ao Geneva.